မာတင် Vrijland ကားအဘယ်သူနည်း မာတင် Vrijland
မာတင် Vrijland ကားအဘယ်သူနည်း
သူကစာအရေးအသားဆောင်းပါးများအတွက်ပါဝင်နေသည်အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူသည်မာတင် Vrijland ဖြစ်ပါတယ်?
ပြီးသားအနည်းငယ်ဆောင်းပါးတွေမှာတော့ငါကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာလုံးဝနယ်သာလန်အတွက်ထိန်းချုပ်ထားကြောင်းရှင်းပြသည်။ ငါ "လျှို့ဝှက်ချက်ဝန်ဆောင်မှုကထိန်းချုပ်ထားဖို့စာသားကိုးကားပါ။ နယ်သာလန်မှာကလပ် GISS တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကသက်သေပြရန်အတွက်, သင်အမှန်တကယ်များ၌ရန်ရှိသည်။ ဒါက unscheduled ဖြစ်ခဲ့သည်နီးပါးငါ့ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပေမယ့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်တယ်, ဒါငါမောမိပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါပြုလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်အကျဉ်းချုပ်တစ်ဦးစာရေးဆရာသကဲ့သို့ငါ၏ပေါ်ပေါက်ရေး၏သမိုင်းကိုဖော်ပြရန်သင်တို့သည်လည်းငါ၏ထင်မြင်ချက်သို့မဟုတ်မနှင့်အတူသဘောတူရှိမရှိခွဲခြားသတ်မှတ်သောခကျြအောညွှန်ပြသည်။
ငါ 2012 ၌စပြီးရေးသားသောအခါ, ငါအစဉ်အမြဲလုပ်ချင်ချင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးအလုပ်ရှင်သည်ဒေဝါလီခံခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောအလုပ်တွင်ရုတ်တရက်ကျွန်ုပ်၏ဝမ်းဗိုက်သည် 'ချုပ်ထားသောဝတ်စုံများနှင့်အငှားကားများ' နှင့်ပြည့်သွားသည်။ ခဏရေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ('ခဏ' လို့ထင်တယ်) နဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏ CV ကိုမဖျက်ဆီးရန်အမည်ဝှက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကနေအလုပ်ထုတ်ပစ်ခွင့်ပေးတယ်၊ ၎င်းရေးသားခြင်းကို Arend Zeevat မှ (ယခုဖျက်သိမ်းလိုက်သော) ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Argusoog မှဆောင်းပါးတပုဒ်နှင့်စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် Anass Aouragh အမှု၌ထို site ကိုတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်တစ်ထောင်အကြိမ် 150 သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Peter R. de Vries တီဗွီမှာဒီလိုပြောတာကကင်မရာနဲ့ 'ရာဇ ၀ တ်မှုခင်းမြင်ကွင်း' ကိုပဲသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် တစ်ဦးချင်းစီဆံပင်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ fibril ဤသည်၌ (မိမိကိုယ်ကို) လူသတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။ မှန်ကြီးနှင့် site ကိုမှသေးငယ်တဲ့ကင်မရာကိုအပျော်တမ်းမှသှားလြှငျငါအံ့သြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီမှာ Anass တွေ့ရှိခဲ့မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မျက်မြင်သက်သေများသူတို့နေဆဲအလွန်နံနက်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်မိမိတို့၏ခွေးကုန်ရာမှစုပြုံပြွတ်သိပ်အများကြီးတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုလုံးကိုနယ်သာလန်နဲ့ကျွန်မကိုလည်း NFI သူသခှေဲစိတျခွငျးအစီရင်ခံစာတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေသောအခါအမှုသညျထ။ အဲဒီ (ငါ့ site ကိုမှ ပို. ပင်ဧည့်သည်များပေးပါလိမ့်မယ်) ဘယ်သူမှမဟုတ်ဘဲရဲရင့်တစ်ခုခုကြောင့်, သတင်းအတွက်ကြီးမားသောခဲ့ပေမယ့်ငါ့နာမကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။
ငါအမှု၌ချိုးငှက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းနီးပါးကျွန်မအွန်လိုင်းရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းအမြိုးမြိုးနှငျ့တစ်ခုကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအသေးစိတ်ကြေငြာတလျှောက်တွင်ယနေ့တိုင်အောင်အဘယ်အရာကိုမျှမပြုတော်မူပြီရှိနေသော်လည်းပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါသညျဤကမ်ပိန်းအစိုးရကိုထောင့်ကနေကြွလာသည်ဟုသက်သေပြဖို့ကရှင်းပြသည့်အခါတစ်ဦးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုမီးရှို့ဝံ့သူတစ်ဦးရှေ့နေကိုရှာ။ တောင်မှပုန်ကန်တတ်သောရှေ့နေ Sven Hulleman ငါ၏အတောင်းဆိုချက်ကိုမှမတုန့်ပြန်ရတယ်။
အဆိုပါအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာထိုနေ့ရက်ကာလ၌နှိုးဆော်နှင့်တစ်ဦးစာရေးဆရာခဲကြားဖူးသကဲ့သို့ငါကပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းငါ့အမစတင်မှီကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပါအဝင်အရာဝတ္ထုနဲ့လူတို့ကစုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ Micha Kat သူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါစာတမ်းဖတ်ပွဲတောင်တန်းရန်ဖိတ်ခေါ်နှင့်ပင် '' တောင်တန်း Award ဆုများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါသည်အဦးဆုံးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ကျကြတော့တယ်။ ဒါနဲ့တို့ကတွေ့ဆုံမေးမြန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ယောဟနျသ Consemulderသို့သော်တစ်ကြိမ်ထက်ပိုအလိုအလျောက်ပေါ်မသွားနိုင်ဘူး။ အကြှနျုပျ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်စွာရိုက်ကူးပေမယ့်ဘယ်တော့မှမထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ Marcel ရှုပ်ထွေးခြင်း (အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအတွက်လူသိများတဲ့အမည်) တစ်ခုဘေးဖယ်နေတဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာရှိသကဲ့သို့အဘယ် hypnotist ၏နောက်ဆုံးပြပွဲပြီးနောက်ငါ့ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဤတွင်သူငါတကယ်ကိုထိန်းညှိဖို့ခဲ့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြောတယ်။ "သူတို့က" တစ်ဦးညွှန်ကြားထားစွမ်းအင်လက်နက်နှင့်အတူရုံတစ်ချိန်ကငါ့ကိုပစ်မှတ်ထားနိုငျသညျ။
ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ၌ငါ့တက်ရောက်သူယခုစှဲစှဲလမျးလမျးသရေဖျက်မှုများအတွက်အထူးဆိုဒ်များများစွာအားဖြင့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်မှိုမြေမှထသလိုပဲသကဲ့သို့ငါ၏လိပ်စာဆဲရေးတတ်ခဲ့သည်။ ငါအမည်ရှိဒီရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနောက်ကွယ်ကမောင်းနှင်မော်တာအနေနဲ့ဝန်ထမ်း (နှင့် RTD ယဇ်ပုရောဟိတ်) ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ Jeroen အမြင့် Weij အဲဒီအခြိနျမှာ Micha Kat ကနေထောင့်ပတ်လည်မှာစာသားနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ့် Micha Kat အားဖြင့်နှုတ်ဆက်ပြီးခဲ့သည်။ Joris Demmink: သူအမြင့်ဆုံးလူကိုအစိုးရရှေ့နေများ၏ pedophilia ဆန့်ကျင်နှစ်ပေါင်းဘက်မှာစစ်တိုက်သောကြောင့်, Kat ထို့နောက်သည်အထိအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာကြီးတွေ name ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ Kat ဟာ rusty လက်သည်းအခြေခံအုတ်မြစ်၏ Demmink ဖြစ်စဉ်များဆီသို့သွားခြင်းငှါအကြှနျုပျကိုကိုဖိတ်ကြားနှင့်ငါ့လောင်စာပေးဆောင်။ ကဘာမျှမဖြစ်ခဲ့သည်ကဲ့သို့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်အောင်အားလုံးသည်စဉ် Kat, ပိုက်ဆံန်းကျင်ပစ်သလိုပဲ။ အဆိုပါအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကျွန်မ Demmink စွပ်စွဲသူအခြေခံအုတ်မြစ်အင်္ဂါ, ငါ့ကိုရန်မဟုတ်ဘဲချီတုံချတုံနဲ့ကြောက်ကြ၏။ အထဲကရှာတွေ့ ငါ့စိတ်ဝင်စား။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကငါ့ကိုမှာစိုးရိမျတဒါတုံ့ပြန်? ငါနေဆဲသူတို့တပ်၌ထိုင်? ထိုအခါငါကပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းဒတျချြပြည်နယ်တိုက်ခိုက်ခဲ့သောအခြေခံအုတ်မြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး, တစ်ဦးလိမ္မော်ရောင်ဖဲကြိုးဝတ်ထားခဲ့သည်ဘယ်လောက်သိချင်, အခြေခံအုတ်မြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ထိုးပေါ်တွင်လိမ္မော်ရောင်ဖဲကြိုးသတိပြုမိသည်။ ဒါနဲ့နောက်တစ်ကြိမ်ကြောင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ရှိလူများ၏နောက်ခံသို့တူးသွား၏။ ဒါနဲ့ (ဘင် Ottens အမည်ရှိ) ကိုဖဲကြိုးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောပြည်စိုက်ပျိုးရေးကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ Schiphol န်းကျင်မြေယာအဆင့်မြှင့်၏တန်ဖိုးကကူညီပေးခဲ့ဖူးဆိုတဲ့အချက်ကိုအနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။ ဒီအခြေခံအုတ်မြစ် (အယောင်ဆောင်ပြီးဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းအပါအဝင်) ပြည်သည်ဒတ်ခ်ျပြည်နယ်လိုအပ်ချက်များကို၏ rusty လက်သည်း, နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်ဘီလီယံငွေကြေးထောက်ပံ့သူ Poot မိသားစု, ။ ငါသည်လည်းအခြေခံအုတ်မြစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ ဂျက် Abramoffအဘယ်သူသည် "ရာထူးဂုဏ်ရှိန်" လူကိုအမေရိကန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုဗီဒီယိုများငွေညှစ်ခဲ့သည်။ ဒါနဲ့အမှတ်တမဲ့နှင့်မတော်တဆ Kat ထို့ကြောင့်ဖောမိသားစုကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်နှင့်အကအားလုံးကိုတို့သည်ကြီးစွာသောလှည့်စားစေခြင်းငှါထွက်လှည့်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Demmink ဆန့်ကျင်မှု, အရှင်အမှန်တကယ် pedophile ချိုးဖောက်မှုများမိတ်ဆက်ထွက်လှည့်ပေမယ့်ဒတ်ခ်ျပြည်နယ်၏ထင်ရသောပိုပြီးငွေညှစ်။
ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအားလုံးက်ဘ်ဆိုက်များသို့သျော, အချိန်တွင်၎င်းတို့၏ (ယခုတိုင်အောင်) သူရဲကောင်း Micha Kat ဝန်းကျင်ချိုးဖောက်မှုများထင်ရှားရင်ဆိုင်ဖို့ချင်ကြပါဘူး။ ငါပင်ငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရာရှင်းပြသင့်ပါတယ်ထားတဲ့အတွက်ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ ဒီအင်တာဗျူးတစ်ခု 1 1 ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ငါ့ထံသို့အစီရင်ခံခဲ့ပေမယ့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေစဉ်အတွင်းရုတ်တရက် Micha Kat ပြပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုသူဖောမိသားစုကပေးဆောင်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဂျက် Abramoff နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ခဲ့ကွောငျးလမ်းမှမလွှဲဖို့စီမံကြောင့်၎င်း, တစ်ဦးခေတ်မီနည်းလမ်းခဲ့ပေမယ့်ထုတ်လွှင့် Kat နည်းနည်းကောင်းသောအမှုကိုပြု၏။ တစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးမီဒီယာထို့နောက်အပယ်ခံအဖြစ်ကတည်းကငါ့ကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ သူတို့ကတောင်ဒီ opprobrious နှင့်ကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုများအတွက်အကြှနျုပျအဘို့ကအားလုံးကိုထုတ် ယူ. အပေါငျးတို့သ (ဆိတ်ကွယ်ရာ Niburu.co နှင့် Micha Kat ရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူများသည်အွန်လိုင်း site ကိုမှ) သို့မဟုတ်မထားရှိခဲငါ၏အဆောင်းပါးများမှဆက်သွယ်ပေမယ့်ယခုသူတို့သညျငါ့ကိုအထူးလေးနက်စွာတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကုန်အံ့ခဲ့ရတယ်နှင့် ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့အထိတွေ့ Micha Kat ၏တိုက်ခိုက်မှု။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖြစ်ပျက်မတိုင်မီတစ်ချိန်ကတိုင်းပြည်၏တောင်ဘက်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာတပ်ဖွဲ့များ join ဖို့အစည်းအဝေးတစ်မျိုးများအတွက် Marcel ရှုပ်ထွေးဖိတ်ကြားသော်လည်းငါဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါထောက်ခံမှုငါ၏အလောင်စာဆီကုန်ကျစရိတ်တွေ့ဆုံရန်လှူဒါန်းခဲ့ခဲ့သည်သာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာငါ့အအလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ဟာကျဆင်းနေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းခဲ့ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပြီးသားအနိုင်နိုင်ကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဖြည့်ဆည်းစေနိုင်ကြောင်းနှင့်ထိုအချိန်ကငါ့အိမ်ကိုပြီးသားအတင်းအဓမ္မ Anti-ကီထိုင်အသက်ရှင်ရန်ရှိသည်ဖို့ကြံစည်။ သို့ဖြစ်. ဟောင်းလောင်စာသို့ကားတစ်စီး guzzling ကျောနာရီနာရီ drive ကိုသွားနှင့် 4,5 4,5 ခဲ့ရသည်။ ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအတွင်းလက်တွေ့ကျကျလူတိုင်းဂုဏ်သတင်း (စသည်တို့ကို Marcel ကြေးဝါ, ကြော်ငြာ Broere, Guido Jonkers) ပစ္စုပ္ပန်ရှိရာအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏ကြောင်းအစည်းအဝေးမှာသမဝါယမ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကစုစည်းချန်နယ်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာရောက်လာပြီခဲ့သည်။ Marcel ရှုပ်ထွေးသူသန်းပေါင်းများစွာရရှိနိုင်စေရန်လိုချင်သူတွေကိုသိတယ်ဟုပြောသည်။ ဒါကထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိချက်ကြီးကငါ့ကိုဤ "ကလူ" လိုထက်ဖြစ်သူကိုမေးခွန်းမြှင့်စေတော်မူ၏။ ငါ့ရှေ့မှာတခါကြောင့်ငါထွက်ရှာတွေ့ဖူးပါဘူး။ ကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်း Micha Kat ထိတွေ့ပြီးနောက်တစ်ဦးကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
2014 ကတည်းကငါရုတ်တရက်မြင်ကွင်းပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့နာမည်အသစ်မြင်တော်မူ၏။ Irma Schiffer အမည်ရှိအမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်ရုတ်တရက်ဒီ Irma Schiffer ၏ပုံစံအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာ Martijn Vrijland စတင်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ခဲ့လျှင်သကဲ့သို့ငါ broached ကြောင့်သလိုပဲကြောင်းအကြောင်းအရာများအပေါ်ဆောင်းပါးများကိုရေးရန်ထင်ရှား။ , ဤသည်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပြင်းထန်စွာအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအားလုံးကိုလူသိများက်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်ရာထူးတိုးခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းမြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်ဂျာမန်သတင်းစာဆရာ Udo Ulfkotte မတိုင်မီပြုမိခဲ့အရာကိုအလားတူတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်ခဲ့သူဂျူဒီ Monshouwer အမည်ရှိဟောင်းသတင်းစာဆရာပေါ်လာကိုမြင်တော်မူ၏။ Ulfkotte 17 နှစ် Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine 'သို့မဟုတ်' 'FAZ အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်' နှင့်သူစီအိုင်အေတခါတရံစာနယ်ဇင်းသမားများလာဘ်ထိုးကြောင်းတရားကိုဟောပြောရသောစာအုပ်တစ်အုပ်နှင့်အတူထွက်လာ၏။ နယ်သာလန်နောက်ကွယ်မှနေဖို့နိုင်ဘူး, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကုသိုလ်ဖြစ်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရှာဖွေနေ Janneke Monshouwer ၏ပုံစံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် '' Udo Ulfkotte '' တယ်။ သူတို့ကဒတျချြသတင်းစာပညာအပေါ်ပိုပြီးသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းတူကိုဟောပြောကြ၏။ အဆိုပါကလပ် WantToKnow, ကမ္ဘာမြေ Matters နှင့်ရာထူးတိုးတခြားဆိုဒ်များအသစ်သောအမည်များကိုစိတ်အားထက်သန်စွာကဆိုသည်။ ဒါကနိုးထ Dutchman ကိုနားထောငျခငျြတအတိအကျဘာဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ရုတ်တရက် Martijn ဗန် Staveren ဝီလျံ Felderhof နှင့် Coen Vermeeren အဖြစ်များစွာသောအခြားသစ်ကိုအမည်များ, ပေါ်ပေါက်ရေးကိုမြင်တော်မူ၏။ "ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ" သို့မဟုတ်ဝိညာဉ်၏ဒေသများနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသူအပေါင်းတို့။ သူမသည်မြေထဲကပေါက်ရုတ်တရက်ထက 2013 ငါ၏အလွန်တက်ကြွသောကာလကတည်းက, ရုတ်တရက်နယ်သာလန်နိုင်ငံလူများ၏နိုးထဖမ်းရန်ခဲ့သည်ဆို၏ကြီးမြတ်ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း, ထိုသလိုပဲ။ သငျသညျသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်သူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဟာ 1 1 နှင့်တန်းများအတွက်သမျှသောဤအမည်များကိုဆှေးနှေးဖို့ကိုငါ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ငါသာငါ့အသညာကိုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။ Martijn ဗန် Staveren ငါပြီးသားတစ်ကြိမ်ဆွေးနွေး; ဝီလျံ Felderhof တစ်ချိန်က '' ပွင့်လင်းစိတ် 'နှင့် Coen Vermeeren ကိုခေါ်ညီလာခံတစ်ခုစီးရီးရဲ့နောက်ကွယ်ကတွန်းအားပန်းကန်ပြားပျံနှင့် 911 ကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်နှိုးဆော်ခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုသမျှသောဤအမည်များဘုံရှိ၎င်းတို့၏လျင်မြန်မြင့်တက်နှင့်၎င်းတို့၏ထင်ရသောန့်အသတ်ဘတ်ဂျက်, အခွင့်အလမ်းများနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာပွညျ၌အရာအားလုံးနှင့်လူတိုင်းအတွက်အားဖြင့်ကောင်းသောပရိုဖိုင်းနဲ့သူတို့ရဲ့မြှင့်တင်ရေးခံစားရသည်။ သငျသညျအငွိုးထားတဲ့, ငြူစူသောစိတ်, စိတ်ပျက်သို့မဟုတ် Self-created အထီးကျန်မှုတွေချင်ပါတယ်နေချိန်မှာအဲဒီနှငျ့သငျမာတင် Vrijland ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ် 'အပြုသဘောအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။ ကြောင်းအဘယ်သူအားမျှ။ ငါမဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်သတင်းနှင့်မျက်မှောက်ရေးရာအပေါ်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်များနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့အတွက်အမှန်တရားရှာဖွေနေသူအတူကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန်သို့ရောက်လာသည်ကား, ငါမူကားဘာသာရပ်များစာသားပြန်ပေးဆွဲကြောင်းသတိပြုမိသောကြောင့်, မကြာခဏ desinfo ဆက်စပ်နေကြသည်သို့မဟုတ်ရှိသည်မယ်လို့ မှားယွင်းသောဆောင်, ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတိပေးထွက်ပါစေခံစားရတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ငါဒီမှာကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအတွက်အပေါငျးတို့သက်ဘ်ဆိုက်များသို့ဖြစ်လျှင်ငါ့ကိုကျဆင်းသွား (နှင့်ယခုအချိန်တွင်ထံမှအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်) ထိုအချက်ကိုသင်သတိပေးမယ်လို့ကျနော် Micha Kat unmasked ကောက်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးခေါင်းလောင်းမြည်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုအားလုံးအသစ်ကပေါက်မှိုကိုလည်းဘုံရှိသူတို့၏ကွှေးကျွောခွငျးမှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုခံရပုံပေါ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ် "ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ။ " ဒါကြောင့်သေချာပေါက်သင့်သလဲ ဒါဟာငါ့အမှု၌ဖြစ်ပျက်သောအကအနည်းဆုံးထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ် Scan ကို, ထောင်ချ, ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုရပ်တန့်, ဒါပေမယ့်ပင်ယခုအချိန်အထိအသက်, နေအိမ်သို့နှင့်ကျောင်းအပါအဝင်ငါ့သမီးအကြောင်းကိုအများအပြားအသေးစိတ် posted ခဲ့သည် သွား. မရခဲ့ပေ။ ဒါပေမယ့်လုံးဝလုပ်စရာမလိုဘူးကျန်ရစ်အပေါင်းတို့နှင့်အတူအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာဆိုဒ်များကခန့်အပ်ဘူး။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်အတွေးဖြစ်စေခြင်းငှါ, ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှကြွေးပေမယ့်အမှုအရာတီထွင်ခြင်းနှင့်ကြေညာချက်များဘာမျှမအမှုကိုပြုနေကြသည်ဟူသောအချက်ကိုမယ်; ဒီသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြည်နယ်န်ထမ်းကနေစွပ်အိတ်ထဲကလာဆိုတဲ့အချက်ကို; ထိုကဲ့သို့သောတိုက်ခိုက်မှုများသည်အခြားရောက်မှုပျက်ကွက်ဆိုတဲ့အချက်ကို; သူတို့မြှင့်တင်ရန်နှင့်ကူညီပံ့ပိုးတစ်ဦးချင်းစီကတခြား, သေးသောမေးခွန်းအချို့ကျလာသောသင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှဆက်ပြောသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့အားလုံးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားကြောင်းဖြစ်နှင့် AIVD အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်နိုင်မလား? သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွေးဖြစ်သနည်း
တစ်မိနစ်စောင့်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အစိုးရများမှားယွင်းသောအလံစစ်ဆင်ရေးကိုသုံးပါကယုံကြည်ကြသည်နှင့်ဝါဒဖြန့်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ပင်မမီဒီယာကိုသုံးပါ, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဝန်ဆောင်မှု, သူ့အိတ်ကပ်ထဲမှာအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာမယုံနိုငျနိုငျမလဲ အဘယ်ကြောင့်အလိုတခုတည်းတစ်ဦး နည်းတူအန္တရာယ်များလှုပ်ရှားမှု နဂိုအတိုင်းထားခဲ့ပါ? ဗလာဒီမာလီနင်ပြီးသားသောအတိုက်အခံဦးဆောင်လမ်းပြဖို့သူ့ဟာသူခုခံထိန်းချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖော်ပြခဲ့သည်။ ဒါမှမဟုတ်အဟောင်းအခုတော့ဒီကြီးမားတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထဲမှာစစ်မှန်တဲ့ခဲ့ကြောင်းဖွင့်တစ်ခုခုဖြစ်သနည်း ကနယ်သာလန်အတွက် AIVD ၏ရေဘဝဲလက်နက်လူအများစုထင်ထက်ပိုချမ်းသာတဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်မည်နည်း ထိုသို့ဖြစ်နိုင် ခေါင်းကိုင်အဖေ ဒတျချြအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ, High-level ကိုဆားကစ်နှင့်ပန်းရံများတွင်လာသော Marcel ရှုပ်ထွေး, နယ်သာလန်၌ဤနိယာမ၏တည်ထောင်သူမွငျမဟုတျလော ကောင်းသောအတိုက်အခံလုပ်ဆောင်စေရန်, သငျသညျကိုသူတို့က "အမှန်တရား" ကိုရှာဖွေနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုလူတွေပေးရန်ရှိသည်။
အမှန်တရားအဘို့သင့်ရှာဖွေရေးမှာ, သငျသညျအကွောငျးကိုကအနည်းဆုံးဒီ '၏ခံစားချက်ကယ့်ကိုယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်အသံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါသင်ကခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာနှင့်၎င်း၏ဗြောင်ကျကျဝါဒဖြန့်, နှင့် (မကြာခဏ) မုသာစကားကိုကျော်လူတိုင်းစိတ်ပျက်, ရှာဖွေနေသည်အဘယ်မှာရှိသနည်းယူရီကာယခုအချိန်တွင်ချဉ်းကပ်။ အဲဒီအကြောင်း 2014 အဘို့ဤလိုအပ်ချက်မြင့်မားတဲ့ဂီယာသို့ဖြည့်ကြောင်းပုံရသည်။ Irma Schiffer, ထိုဥပမာနှင့်အတူအလွန်အလုပ်များဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအတွက်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါသည်။ သငျသညျမွကွေီးပျေါမှာပြားချပ်ချပ်ကြောင်းယုံကြည်ပါသလား ထိုအခါကလွန်ရောက်လာပါတယ်။ ဂြိုလ်သားသို့မဟုတ် UFOs အတွက်ယုံကြည်ချက်, ထို့နောက်သင်မျိုးစုံလိုင်းများကိုသွားနိုင်ပြီးသင်ပင် Martijn ဗန် Staveren အဖြစ်တစ်ယောက်ယောက်ကိုအားဖြင့်ဝိညာဏ "သဘောတူညီချက်ရေးထိုး" ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သငျသညျအမြိုးသားတို့ဘာသာရေးအရယဇျပူဇျောဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ပါသလား သင်တို့သည်လည်း "ဟောင်းဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အတွင်း" ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားများတွင်မကြာသေးမီကရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ 911, ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနှင့် chemtrails: များနှင့်သင်တန်းသူ့နားရွက်နောက်ကွယ်မှကုပ်ခြစ်အကြောင်းကိုယခုအားဖြင့်လူတိုင်းသောကိစ္စများရှိပါသည်။ သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ် WantToKnow, ကမ္ဘာမြေ Matters, Ninefornews မှာသင့်ရဲ့ Beck မှာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့နီးပါးကို "အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ, ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုရားကျောင်းသိသာ untainted ဝန်ကြီးများလိုအပ်မခေါ်နိုင်ပါ။ တစ်ဦးကောင်းနောက်ခံ, နှံ့နှံ့စပ်စပ်အသိပညာနှင့်တစ်ဦးဖှယျဇာတျလမျးနှင့်အတူဓမ္မဆရာများ။ စစွာမြေကြီးပြားချပ်ချပ်မဟုတ်ပါဘူးနှင့်တစ်ဦး "အယူမှားအလံစစ်ဆင်ရေး" အဲဒီတခါတရံဖြစ်ကောင်းသင်ခေါ်ဆိုနေတဲ့ hoax သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမေရိကန်လူထုအစဉ်အဆက်ကစား zoal တီဗီတရားဟောဆရာကစားသည်ကိုသင်အတွက်မလိုချင်ကြဘူးကြောင်းမခေါ်ဝံ့သူများသည် ဘုရားကျောင်း။
ဒါဟာအမှန်တရားရှာသည်သင်၏အလိုရှိ၏။ ဒါကတိုက်တွန်းမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာ၏ပရိယာယ်နှင့်ပရိယာယ်အဘို့များစွာသော၏နိုးထဖို့အတော်လေးထင်ရှားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဦးနှောက်ကိုသုံးပါရန်သင်ယူကြပါဘူး။ ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာဘုရားကျောင်း: သင်အကောင်းဆုံးအသံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မတိုင်မီသင်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကတရားဟောစဉ်မြင့်ရှိရာကိုထံမှဟောင်းဝန်ကြီးအမှန်တရားပရိသတ်တို့အားတရားကိုဟောသကဲ့သို့, ဝန်ကြီးတဖန်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့သင်ယူပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာသစ်ကိုဝန်ကြီးတွေအပေါ်နောက်တဖန်ယုံကြည်စိတ်ချဖို့သင်ယူပါ။ ထိုကြောင့်သင်တို့ကိုသူတို့လေ့လာခဲ့ကြပြီ, သင်သည်ယုံကြည်စိတ်ချဝန်ကြီးများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအမှန်တရားဝါးရန်သင့်ရှိမသိသောအရေးပါသည်။ အမှန်စင်စစ်သင်ကိုယ်တိုင်ဘာမှလုပ်ဖို့ရှိသည်။ သငျသညျအချိန်မရှိဘူးနှင့်ဝန်ကြီးအဲဒီမှာလေ့လာခဲ့မှသိရသည်။ ကောင်းပြီ, သောသမဝါယမအခမဲ့မီဒီယာ၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုအကြောင်း; အဆိုပါပဏာမခြေလှမ်းပုံကြော်ငြာ Broere နှင့် Irma Schiffers အားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပေမယ့်အမှန်တကယ်အဘယ်အရာကိုထားပြီးနောက်ကွယ်မှအတူတကွအလုပ်လုပ်သောအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာများ၏အစီအမံ။ ဒါဟာ Marcel ရှုပ်ထွေးအတူအစည်းအဝေးတွင်ငါ၏အတစ်ကြိမ်တည်းရှိနေခြင်းစဉ်အတွင်းဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်သောပဏာမခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့မကြာသေးခင်နှစ်တွေအတွင်းနည်းဗျူဟာအဘယ်အရာဖြစ်သလဲ? ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းမှတစ်ဆင့်မလိုလားအပ်တဲ့သုတေသီများမာတင် Vrijland ဖယ်ရှားပစ်တဲ့ထွက်လှည့်လိုက်တဲ့အခါဒါရုတ်တရက်သူတို့အားမလိုချင်တဲ့စာရေးဆရာအနေဖြင့်အသိအမြင်အသစ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်နေ့တိုင်းစာဖတ်သူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ခဲ့ကြသည်သော "အရှုံးမပေး" တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကယိုစိမ့်ခြင်းနှင့်ယိုစိမ့်တံဆိပ်ခတ်ထားမှပလပ်ခံရဖို့ခဲ့တရားရုံးအပြည့်အဝသစ်ပင်များနှင့်အတူစီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးအနည်းငယ်ကြောင့်အထက်ပါလူသိများဘာသာရပ်များအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုခုပြောပေမယ့်နေဆဲပဲအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ရတယ်အားလုံးကြီးထွားနိုင်ကြောင်းသစ်ပင်များများစွာ။ site များ၏သစ်တောသည့်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအတွက်အကြံအဖန်ခဲ့သည်။ အဲဒီသစ်တောထားပြီး AIVD ကထိန်းချုပ်ထားသမျှသောအချိန်နှင့်နောက်ကွယ်မှပြီးသားကောင်းစွာ Marcel ကြေးဝါနှင့် Guido Jonkers အဖြစ်ညှိနှိုငျးရေးမှူးများကအတူတကွညှိနှိုင်းသူတို့အားက်ဘ်ဆိုက်များအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်အဖြစ်အမြင်အာရုံလယ်ပြင်၌မျက်စိခဲ့ ပို. ပို. ရှုပ်ပွနေအောင် en ပို. ပို. သတင်းအချက်အလက်များ။ သင်ကသစ်ပင်များအဘို့ထင်းမမြင်ရ! ထိုအတိအကျရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ နှင့်တံတား! ရုတ်တရက်အချို့ယုံကြည်စိတ်ချရသော-ရှာဖွေနေအမျိုးအစားများကိုဖခင်နှင့်မိခင် (သောသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူပင်အမှိုက်သရိုက်များထံမှတလျှောက် လာ. ,) ရှိပါတယ်။ အဆိုပါယုံကြည်စိတ်ချရသော-ရှာဖွေနေစီးပွားရေးပညာရှင်ကြော်ငြာ Broere နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရှာဖွေနေ Irma Schiffer ။ သငျသညျအလှနျမွငျ့မားမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုညွှန်ပြအချက် '' ကောင်းသောခံစားရတယ် ''? နှင့်သင်တန်း၏ယခုကြှနျုပျတို့သဘာဝကျကျကြီးမားသော 1 ဘုရားကျောင်းသမျှသောဤအသေးအသင်းတော်များစည်းလုံးဖို့ကူညီချင်ပါတယ်ထားတဲ့ကမ္ဘာမြေ Matters ၏အမြဲချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင် Arjan Bos ရှိသည်။ သင့်အနေဖြင့်ဝန်ကြီးများခန့်အပ်သူကိုခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ထိုအသင်ဤဘုရားကျောင်း join ကျေးဇူးပြုပြီးမလဲ အဆိုပါဘုရားကျောင်းသည်၎င်း၏ကောင်းသောအစီအစဉ်များကိုထုတ်သယ်ဆောင်ရန်ပိုက်ဆံလိုအပ်ပါသည်။ (Marcel ရှုပ်ထွေးမတော်တဆငါ၏အထံတော်၌အစည်းအဝေးမှာအရိပ်အမြွက်ပြောကြားကဲ့သို့) ဒါကပိုက်ဆံနောက်ကွယ်မှခဲ့, သင်မသိရပါဘူး။ ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းလည်းပိုက်ဆံများများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သရုပ်ြပလာရောက်ပူးပေါင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုအသင်းတော်မှသင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကျူးလွန်ပြောဆိုရန်။ သင့်အနေဖြင့်အခမဲ့မီဒီယာ၏ဤအသစ်ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းနှင့်အတူယခုလုပ်ဖို့ရှိသည်။ သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားတွေ့ရှိရန်အဘို့အသူတို့ဟာကြည့်ရှုမည်။ သူတို့ပြီးသား "သက်သေပြချက်ယုံကြည်စိတ်ချရ" ဖြစ်ကြောင်းကတည်းက။ Oh, နှင့်သင်ပြီးသားယုံကြည်စိတ်ချရသောကြောင့်ဘုရားကျောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအနေလျှင်, အချို့ကိုသင်ပင်တော့ဘူးကိုထောကျပံ့ဖို့မ, သက်သာချောင်ချိရေးအပေါ်မရနိုငျသောမာတင် Vrijland အန်လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျယုံကြည်စိတ်ချအဖြစ်သူ့ဟာသူတင်ဆက်မယ့်ကလပ်မှပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, သင့်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဝတ်ဆင်။ အသစ်ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ မစ်ရှင်ပြည့်စုံ။ (ဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)
ဦး operated ဖြစ်ပါတယ်
ယခုတွင်သင်သည်ထို့ကြောင့်အခမဲ့မီဒီယာ၏ "စစ်မှန်သောအမှန်တရား" နဲ့ operated နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ AIVD ပထမဦးဆုံးသစ်တော created ကြောင့်ဖြေရှင်းချက်လွှတ်တင်အဖြစ်။ ''အတိုက်အခံကိုထိန်းချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဦးတည်သွားစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်သင်မည်သို့ပြန်အဲဒီမှာ AIVD သိရသလဲ သင်ကဓြှုဘယ်လိုသိရသလဲ ကိုယ့်ဟောင်းတဦးဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘား၏ဗျာဒိတ်တော်များကိုယူပါ! ဒါကဧကန်အမှန်သာအမှန်တရားပြောတတ်? ဟုတ်ကဲ့, သင်တန်း! ကဲ့သို့ပင်ငါအမှနျအဘို့ရှာကြသည်နှင့်သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားနှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ "အမှန်တရား" သင်တန်းကိုတစ်ဦးဆွေမျိုးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်။ သင်္ဘောကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်ပင်လယ်ကူးသောအခါသမ္မာတရားကိုသင်တို့အားတွေ့မြင်လျှင်သင်သိသလား? သင်တစ်ဝှမ်းရေရှိသည်, အကွာအဝေးကနေကမ်းခြေကိုတွေ့မြင်နှင့်အခြားခရီးသည်များကဝိုင်းရံလျက်, ကြောင်း axiom ။ သင်ကမ်းပေါ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအဘယ်အရာကိုမမွငျနိုငျသညျ။ ကမ်းနားကနေထိန်းချုပ်ထားသင်္ဘောရွက်။
အောက်ကပုံထဲမှာသင်ကမီးခိုးရောင်လမ်းဆုံလိုင်းများကြည့်ရှုရန်ကောင်းသောမကြည့်ကြပါ။ တစ်ခါတစ်ရံအသင်တစ်ဦးအစက်ကြည့်ပါ။ သင်တို့မူကားတစ်ချိန်ကမှာရှိသမျှကိုအစက်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သလဲ
(အောက်တွင်ကြည့်ပါ) အခြားပုံရိပ်ခုနှစ်တွင်ဖွင့်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ကြည့်သင်သည်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပေမယ့်သင်အနည်းငယ်ပိုရှည် 10 စက္ကန့်ကို (4 အစက်ပေါ်တွင်သင်၏မျက်စိအာရုံစူးစိုက်) ထက်ကိုကြည့်ရှုလျှင်, သင်၏မျက်စိနဲ့အရာရာကိုမျက်တောင်ခတ် သင်တစ်ဦး "မျှမျှတတလူသိများဇာတ်ကောင်" ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးက hidden ရုပ်ပုံကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အမှန်တရားရဲ့သင့်ရဲ့အမြင်ကိုလည်းကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်ညာဘက်တစ်ခုခုတွေ့မြင်ထင်လျှင်, သင်ရုံမြင်နိုင်ပုံရိပ်အချို့အချက်များကိုလက်လွတ်ဟန်တစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းမှန်ကန်သောပုံရိပ်ကိုဖုံးကွယ်ထား။ အဘယ်အရာကိုအောက်ကပုံထဲမှာ '' လူမည်း '' ပြပွဲရန်ပင်မမီဒီယာနှင့်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ "အဖြူ" ကိုယျဆိုရငျကော အဘယ်သို့နည်း, သင်ဆဲဝှက်ထားသောပုံရိပ်မကြည့်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုအတိအကျရည်ရွယ်ချက်ကို့အမြင်ပါပဲ။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "အလင်းလုပ်သားက" အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအတွက်လူကြိုက်များအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ "အလင်း" သည်မှောင်မိုက်၌ထွန်းလင်း။ သို့မဟုတ်ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားထဲမှာရှိသကဲ့သို့ ဒီရုပ်ရှင် သူကလူတစျစုမှောင်မိုက်၌နေထိုင်လျက်ကပြောပါတယ်ခြင်းနှင့်မှောင်မိုက်ဖို့အသုံးပြုရရန်ရှိသည်အခါ, ဒါကြောင့်လှလှပပကရှင်းပြသည်။ ထိုအခါယေဘုယျအလင်းအိမ်စီးကရက်ပေါ့ပါးလူတိုင်းအလင်းဖြင့်လွှမ်းနေသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသံဒါပေမယ့်အလင်းရုံ Luciferian အလင်းကိုရည်ညွှန်းခံရပေလိမ့်မည်။ ငါနောက်ပိုင်းမှာပြန်လာကြလိမ့်မည်။ မေးခွန်းအခုသင်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မမေးသင့်ပါတယ်: ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ '' အဖြူ '(အလင်း) ကခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာ၏အနက်ရောင်ပုံရိပ်ကိုကိုယ်စားပြုရှိလျှင်, သမ္မာတရားကိုသင်တို့အားသို့မဟုတ်အမှန်တရားတစ်ဦးအရိပ်ကိုမြင်ရ?
သင်ကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ AIVD အားဖြင့်ထူထောင်ခဲ့ခက်သက်သေအထောက်အထားချင်တယ်။ ငါသည်သူတို့မကျင့်သောထုတ်ပြန်ချက်များမဟုတ်ဘဲရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ငါနားလည်ပါတယ်။ ဒါဟာအထက်ပုံနဲ့တူရဲ့, ဒါကြောင့်သင်ကအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ကိုတွေ့မြင်ပေးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဝှက်ထားသောပုံရိပ်ကြည့်ဖို့, သင်အစက်4မှအနည်းငယ်ပိုရှည်ကြည့်ဖို့ရှိသည်, ပြီးတော့အားလုံးတက်သင်၏မျက်စိ blinking နှင့်သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်အရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့စောင့်ကြည့်။ ငါသာဖန်တီးမြင်နိုင်ပုံရိပ်၏အောကျဖျောပွနိုငျ။ ထိုကောက်ကြောင်းတစ်ခါတစ်ရံလူများကအနက်ရောင်ပုံထဲမှာပုံ '' အဖြူ '' ပုံစံသရုပ်ဆောင်နှင့်ပုံပြင်များဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့က hidden ပုံရိပ်ကိုဖုံးကွယ်။ သင်ရုံသင်၏မျက်စိမျက်တောင်ခတ်ထားသောအမြင်အာရုံပုံရိပ်ထဲမှာ hidden ပုံရိပ်ကိုတွေ့မြင်ရန်။
ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘား၏ဇာတ်လမ်းကဒီအသိတစ်ခုပြီးပြည့်စုံသောသာဓကဖြစ်ပါသည်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ညာဘက်ပုံသင်တို့ရှိသမျှကိုပြောပြတယ်။ သူကဘယ်လိုဘဏ်လုပ်ငန်းအကျင့်ကိုကျင့်သငျသညျကိုပြောပြပင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်၏လက်ပါးစေဖြစ်ကြောင်းကရှင်းပြသည်; အဆိုပါဘဏ်လုပ်ငန်းစနစ်ကပိရမစ်ထိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိရမစ်၏ထိပ်မှာ bis ဘဏ်ဖြစ်၏ ဗဟိုဘဏ်အပါအဝင်နောက်တဖန်သာမန်ဘဏ်များအကြား။ သူကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာကယ့်ကိုသိတယ်ခဏတက်ကြွမည်သူမဆိုခဲ့သောနာမည်ကြီးပိရမစ်ပုံတစ်ပုံကိုရှင်းပြသည်။ ရော်နယ်အောင်နိုင်ထင်ရသောဆိုအနာအစက်အပြောက်အပေါ်လက်ချောင်းများကရှင်းပြသည်! Irma Schiffer သူ့ကိုအင်တာဗျူးနှင့် (တိုက်ဆိုင်2မိနစ်သပ်သပ်ရပ်ရပ် Mason အရေအတွက်ကိုယူရာ) ကိုအင်တာဗျူးစီးရီးအပိုင်း 33 ရဲ့အဆုံးမှာရော်နယ်အောင်နိုင် Mason လည်စည်းကိုထပ်သံသယတစ်ကြိမ်ပဲ့များနှင့်အမျက်ထွက်သူ၏ဇာတ်လမ်းကိုဆွဲဝံ့မှပြောဆိုရန်မည်သူမဆိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည် ။ ဒါကဖြစ်နိုင်ဘား CV ကိုလိုက်ဖမ်းနေသော Micha Kat နှင့်အတူဆက်နွယ်သည့်ထိန်းချုပ်ကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ငါရော်နယ်အောင်နိုင်အကြောင်းကိုဒီရုပ်ရှင်မထုတ်လုပ်မှု၏ထိုအချိန်ကရေးသားခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကငါခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာ NLP နည်းလမ်းများမှတဆင့်ပွူ, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားအချိန်ပြည့်၏အသုံးပြုမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ အထူးသဖြင့်, ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးမိနစ်များတွင်လက်အမူအရာကိုအောက်တွင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအချက်ပြမှုများပေးပါ။ လက်တို့ကို Spreading အဆိုပါ subliminal မက်ဆေ့ခ်ျကို "ငါကြီးမြတ်တယ်" (နှငျ့သငျသေးငယ်ပါတယ်) ပေးသည်; တစ်ဦးမျက်ရည်-ပြုမူနှင့်အတူအဆုံးသတ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အမျက်ဒေါသအရွက်သောမိမိကိုယ်ကို၏တိတ်ဆိတ်သေံ; အဆိုပါညွှန်ပြလက်ချောင်း, အမျက်တော် ထွက်. အသံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား "သင်၏နှုတ်ပိတ်စောင့်ရှောက်လော့။ " ဟုပြော ရော်နယ်အောင်နိုင်စားဆင်ယင်စတိုင်, လက်အမူအရာနဲ့နှုတ်ထဲမှာ set "ကျွန်မအခွင့်အာဏာပေါ့" ၏မသိစိတ်တစ်ပိုင်းသတင်းစကားပေး။ တစ်ခုလုံးကိုအင်တာဗျူးမဟုတ်ရင် "မငြင်းနိုင်သောအမှန်တရား" နှင့် Irma အဓိကအားဖြင့် '' ဟုတ်ကဲ့ '' ဟုပြောတာဝန်နှင့်မွေးစား mode ကိုအဖြစ်သငျ့စိတျထားရန် '' ညာဘက် '' နှင့်အတူစကားများကိုလှိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)
ကြှနျတေျာ့အတွက် ပထမဦးဆုံးဆောင်းပါး ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားအကြောင်းကိုငါရှင်းလင်းစွာသူတစ်ဦးသရုပ်ဆောင်ကြောင်းကိုညွှန်ပြပုံကိုရှင်းပြတယ်။ Irma Schiffer လည်းနည်းလမ်း (မြင် Derren ဘရောင်း '' ရောင်းရန်အံ့ဖွယ် '' အဖြစ်ပုံပေါ် ဒီရုပ်ရှင်) လေ့ကျင့်သင်ကြားရမည်ရန်။ သူမရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုလည်းဿုံစစ်မှန်တဲ့။ သူမသည်အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး, HSP ရှိပါတယ် .. ah သင်မူကားသူမကဆိုသည်ဘာမှ [quote] ဖတ်ရှုနိုင်သည်
မွေးဖွား (ပိုပြီးပျက်ကျ) တစ်နေရာရာမှာ Hilversum အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ31962 တွင်; Jungian ကုထုံး; အမှန်တရားရှာဖွေသူ; နည်းပြ; အလင်းကိုစစ်သည်တော်; လူများ, တိရစ္ဆာန်များနှင့်သဘာရန်အလွန်ဆက်ကပ်အပ်နှံ; လိမ်လည်မှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှု, ထိုးထွင်းသိမြင်ပန်းချီဆရာမှအထိခိုက်မခံခြင်းနှင့်မတည့်, (ထွ) ဘေ့ကစားသမား; HSP အကယ်စင်စစ်; လူမှုရေး Idealist; ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်မွကွေီးဟာသဉာဏ်, (All-In-One!), ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးမှာ Waterman; ငါအဘို့အသွား လွတ်လပ်ခွင့်, လွတ်လပ်ရေး, တန်းတူညီမျှရေး, တရားမျှတမှု, လင်းမြင်သာမှုနှင့်ရိုးသားမှုကို။ "မကြာခဏ inimitable စားပြီးနဲ့လိုက်တယ်အဖြစ်အခြားသူများအနက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤတွင်ကျနော်တို့နောက်တဖန်သင်တို့ကိုမကြာခဏအစားထိုးမီဒီယာယူကြပြီမယ်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "အလင်းအလုပ်သမား" ရှိသည်။ သငျသညျထိုအလငျးလာသောသူကိုအောကျမေ့ပါနဲ့, အနက်ရောင်ပုံထဲမှာတစ်လျှောက်လုံးသူအဖြူအရောင်? Irma သိသာသည်၎င်း၏ HSP ဖို့အလွန်အမင်းထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ သူမ 2014 ကတည်းကရုတ်တရက်အားလုံးပူးပေါင်းလုပ်ကြံဒီတော့ "ကောင်းသော" ပြုစုပျိုးထောင်သိ (မ AIVD ၎င်း၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ဖြစ်စေ) ဖြစ်သောကြောင့်အကြောင်း, ကောင်းပါတယ်။ သို့သော်ရှိသမျှသောမဟုတ်ဘူး! Irma လည်းအလတ်စားဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ, ဒါဆိုသင်သည် Irma နှင့်အတူအဆင်ပြေနေပါပြီ! သူတို့ ခံစားချက်များကို သို့မဟုတ်ပဲအမှားတစ်ခုခုနှင့်သူတို့အနက်ရောင်အထည်ပေါ်အဖြူသင်သည်ဆေးထိုးခြင်း။
ယခုသင်သည်ငါခေါ်ခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားနှင့်အတူမလာကြဘူးအဘယျသို့ပေမယ့်စဉ်းစားပေလိမ့်မည်။ သငျသညျအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပုံထဲမှာကြည့်ရှုဖို့လိုအပျသင်သည်အဘယ်သို့တွေ့ရှိသလား ငါပုံကြမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ကကြည့်ဖို့ကြိုးပမ်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလူတိုင်းကရှုမြင်မဟုတ်စေရမည်ဖြစ်သည်။ အထောက်အထားတစ်ခါတစ်ရံအမှတ်လက္ခဏာတွေနဲ့ဝှက်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများတည်ရှိသည်။
ဤရွေ့ကားဝှက်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျသည်အထိမကြာသေးမီကအဖြစ်မမြင်နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်ပြသနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောပြဿနာသင်သည်လည်းရိုးရှင်းစွာမြင်ချင်မပေးစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအသင်းတော်၌ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးသားပါပဲအပေါင်းတို့နှင့်အခွန်အခနှင့်သမဝါယမအခမဲ့မီဒီယာပေးဆောင်သို့မဟုတ်ပြီးသား (မရှိသေးပါဘဏ်သူ့ဟာသူခေါ်နိုင်ပါတယ်) ကိုရွှင်လန်း B ကိုမှပေးဆောင်သင့်ရဲ့အလိုလိုကျလှနျးခွငျး€ 100 ရှိသည်။ သငျသညျကိုရှငျးရှငျးလငျးလငျးမှောင်မိုက်ထဲမှာအလင်းကိုထည့်လေ့မရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းတိုက်ခိုက်မှုမဟုတ်ပါဘူး? ကောင်းပြီ, သင်အမှတ်လက္ခဏာတွေမှသင်၏မျက်စိပိတ်လိုက်ပေမည်။
ဥပမာအားဖြင့်, စာဖတ်သူရွှင်လန်း B က (ank) ရော်နယ်အောင်နိုင်ဘား [quote] အကြောင်းကိုအောက်ပါ commented
ငါသည်ဤဆန့်ကျင်နေတဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာရှာဖွေနေပါတယ် ပျြောရှငျသောအိပ်ရာ၏ပင်မစာမျက်နှာ။ သငျသညျသတိထားမိပထမဦးဆုံးအရာသိသာသည်သူ၏ Mason အပေါ်ယုသင်္ကေတသရုပ်ဖော်ထားတဲ့လိမ္မော်ရောင်လိုဂိုဖြစ်ပါတယ်။ ထိုခဏခြင်းတွင်ထိုအရပ်၌ဆောင်ပုဒ်ဘေးတွင် "သင်၏ဘဏ်တည်ထောင်ခြင်း။ "
နှင့်အခြားမှတ်ချက်ပေးသူသည်အောက်ပါ [ကိုးကား] ဟုဆိုသည်
အဆိုပါ DB လိုဂိုရွှင်လန်းဘဏ်ထင်ဟပ်နေသည်။ သင် Rothschild ရဲ့ပါတီမြားဓါတ်ပုံတွေကိုသတိရသငျသညျဓာတ်ပုံများအပါအဝင်မှတ်မိနိုင်ပါသလား? အဆိုပါဖိတ်ကြားချက်ကိုကဒ်မှန်အရေးအသား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့ပါတယ်, ဤနေရာတွင်ကြည့်ရှု.
အဆိုပါမှန်အမှန်တကယ် Aleister Crowley ပြောင်းပြန် speach ၏ (Luciferian) နည်းစနစ် "နှင့်အခြား" ပြောင်းပြန်နည်းစနစ်များအတွက်အရေးပါသောသင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ကသောသင် Luciferian ခဲ့ကြသည်အဖြစ်မှန်, ပေးသည်။ အဆိုပါရွှင်လန်း B ကိုပြပွဲ၏လိုဂိုအတွက် '' ဃ '' ကို 'ခ' 'ထင်ဟပ်။ ထို့ပြင်ဧကန်အမှန်ယင်း phallic သင်္ကေတ (ထိုစကားလုံးဆောင်ပုဒ်တွင် 'တည်ထောင်ခြင်း "' ဘဏ်တည်ထောင်ခြင်း subliminal တစ် phallic စိုက်ထူဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်) အားကပ်လျက်နှစ်ခုဇာတ်ကောင်ပေးခြင်း။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး Luciferian သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဟေးရဲ့ ထွက်. ရုံယူနိုက်တက်ပြည်သူ့ဖောင်ဒေးရှင်းမှ၏လိုဂိုမှာမကြည့်ကြကုန်အံ့။ သင်ဆဲပိရမစ်ကိုအသိအမှတ်မပြုရန်အလွန်ကောင်းသောမကြည့်သလဲ? လူစီဖာထောက်ခံသူများနှင့် "ငါတို့ရှိသမျှသည်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏" ဟု "တစျခုမှာကမ္ဘာ့ဖလားအစိုးရ" ၏ထောက်ခံသူတွေနဲ့သူတို့ကအခမဲ့အလိုတော်၏တရားရိုသေလေးစားယုံကြည်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့် "One World ဘာသာတရား" အစဉ်အမြဲသူတို့ရဲ့ Luciferianism မှတစ်ဆင့်ထွန်းလင်းပါလိမ့်မယ်။ မြေတပြင်လုံးရုပ်ပုံရောင်စုံကြောင်းဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တရားကိုတွေ့မြင်ရန်သင့်အားထို့ကြောင့်သာလွန်းပျော်ရွှင်ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့ကအနက်ရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်အဖြူသော်လည်း, သငျသညျကိုသာဝှက်ထားသောပုံရိပ်များ၏ပြောင်းပြန်ကြည့်ပါ။
ယူနိုက်တက်ပြည်သူ့လူအားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ချင်တယ်။ မအသံသည်အလွန် Luciferian ပါသလား သင်ကလိုဂိုအတွက်အပြစ်မဲ့ပိရမစ်ကိုစဉ်းစားလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ Arjan Bos သည်သူ၏ YouTube ဗီဒီယိုတွေထဲကနှင့်အတူ 666 လက်အမူအရာကိစ္စအသိအမှတ်ပြုရန်? အသင်းတော်၏အဆိုပါတရားဟောဆရာကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာသူတို့နေသောစခန်းထဲမှာသင်ပြပေမယ့်ဝှက်ထားသောကြိုက်။ သငျသညျ Irma Schiffer နောက်ကွယ်မှအောက်ကဗီဒီယိုမှာမှန်အသိအမှတ်ပြုရန်သလား? (ဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်)
ငါ၏အယခင်ဆောင်းပါးအပေါ်စမ်းသပ်မှုကြယ်ပွင့်ပင် (verify မ) မှတ်ချက် [quote] နှင့်အတူဆက်လက်
ရှငျလနျးခ, ဘယ်လိုမဟုတ်ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဆွစ်ဇာလန်၌မတွင်တည်ရှိသည်။ သူတို့ရဲ့အယူအဆဧကန်အမှန်ထပ်မံတီထွင်ပြီးတော့အခြားဘဏ်များတိုးချဲ့ပါလိမ့်မည်, ငါဒါပုံပါဘဲ။
သောမြို့ရိုးပေါ်မှာနိမိတ်လက္ခဏာကိုမပါရှိလျှင်? ဒါကြောင့်သင်ပါမယ်ဟောင်းဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်နေ; အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာပြီးသားရရှိနိုင်သမျှသောအနာအစက်အပြောက်အပေါ်ထိ; Irma Schiffer တွေ့ဆုံမေးမြန်းအစုတခုထဲမှာစုဆောင်း; ထို့နောက်ဘဏ်ကိုစတင်ပိုင်ဆိုင်! ရော်နယ်အောင်နိုင်နှင့် Irma နှင့်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအားလုံးကိုအခြားသရုပ်ဆောင်တွေကိုသင်ပြီးသားနှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်တိုင်းအမှန်တရားရှာဖွေသူကိုရှာဖွေနိုင်သမျှသောဒြပ်စင်များတွေ့နိုင်ပါသည်ထားတဲ့ရေတွင်းတစ်တွင်းညွှန်ကြားထားပြီးအလွန်ယုံကြည်ပုံပြင်နှင့်အတူစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။ ဒါဟာတောက်ပစုစည်းသည်နှင့်အလွန်ကောင်းသောဆောင်ခဲ့လေ၏။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုလှည့်ပတ်သရုပ်ဆောင်အရည်အသွေးကိုအပေါငျးတို့သအနံ့နေဆဲဖြစ်သည်။ Irma Schiffer မျှ 1 အရေးပါသညျ့မေးခှနျးနှင့် On-သက်သေရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားပုံပြင်များအပေါငျးတို့သဟုမေးခဲ့သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအစားထိုးမီဒီယာကျော်သိမ်းယူနှင့်သမဝါယမအခမဲ့မီဒီယာ၏ပဏာမခြေလှမ်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာ join ဖို့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က (သင်မာတင် Vrijland မှညွှန်ပြခြင်းမရှိဘဲသင်တန်း) ကို (Self-created GISS) မှတဆင့်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာဆိုက်များသစ်တောသင်ပဲ့ပြင်ပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပြီ, အစိတ်ပျက်နှင့်ယခုအဘယ်အရာကိုကျေးဇူးတင်? အဘယ်သူသည်ငါနေဆဲယုံကြည်စိတ်ချနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပဲဖတ်ပါသို့မဟုတ်မနိုင်ပါတယ်။ "အိမ်သာဘဲအကြံပေးအိမ်သာဘဲ၏ကျွန်တော်တို့သည်"အလွန်လွယ်ကူသောဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်မရဲ့ဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုခြင်းမှတပါးသင်တို့ကိုအကြံပြု, အထူးသဖြင့်ကျန်ရစ်မရမှပေးနိုင်မလား" အသစ်ကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း "နှငျ့" အခြားရွေးချယ်စရာသင်းအုပ်ဆရာပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းနှင့်သင်တို့၏ဝိညာဉ်ကိုသက်ဝင်စေဖို့ ချိတ်ဆက်ပါ။ yeah, ထို "အလင်းအလုပျသမား" သင်ပြောပြပေမယ့်သင် Luciferian matrix ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလိုရှိ၏။ ကိုယ့်ကိုသင်ကနေလွတ်သောသူမျှော်လင့်ပါတယ်။ ယင်းကအခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာနှင့်သင့်ပုံရိပ်ကိုအတွက်မီဒီယာအရောင်လျှင်ဒါ, သင်ပုံရိပ်အားဖြင့်ဝှက်ထားသောပုံရိပ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကသင်ရုံဝှက်ထားသောရုပ်ပုံလက်လွတ်စေ။
နောက်ထပ်ပြန်မီးခိုးရောင်လိုင်းအထက်တွင်ထားရှိသည့်ပန်းကန်မှကြည့်ပါ။ သငျသညျတိုင်းယခုပြီးတော့တစ်ဦးအစွန်အဖျားကိုတွေ့မြင်နှင့်အစက်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာမီဒီယာအားဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားလျှင်ကြောင့်ပုံရသည်, သို့သော်သင်တစ်ကြိမ်သာမှာထိုသူအပေါင်းတို့ကိုမမြင်ရ။ သူတို့ဟာ Luciferian matrix ကို၏စုစုပေါင်းထိတွေ့မှုကနေသင်တို့ကိုပယ်ရှင်းကိုစောင့်ရှောက်။ သူတို့ယခုအချိန်အထိထိပ်တန်းအလွှာအတွက်ကျူးလွန်ကလေးကယဇျပူဇျောသောသင်ပြောပြရန်အဖြစ်သွားရသော်လည်း။ ခဏပြုမူစိတ်လှုပ်ရှားမှုရော်နယ်အောင်နိုင်ဘားမှတဆင့်လက်နက်? သင်ရွှင်လန်းဘုရားကျောင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ဝင်ပိုနှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိ? ထိုမျှမကအခမဲ့မီဒီယာပြုပါ! သူတို့ကသင့်ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုတကယ်လိုအပ်မလိုအပ်!
အဘယ်အရာကိုဤဆိုဒ်များလုပ်ပေးသူမတိတ်တဆိတ်ပိုက်ဆံနေစဉ်အလှူငွေတောင်းခံသည်။ ဒါကတမင်နည်းဗျူဟာဖြစ်တယ်, ဒါတကယ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်စညျးစိမျဥစ်သူတို့သည်ရှထဲကလေကိုဖမ်းရန်ရှိပါတယ်။ အဘယ်သူသည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအားလုံးပဲဒဏ်ငွေတည်ရှိဟန် (GISS ခြင်းဖြင့်ရန်ပုံငွေ) အားလုံးကြောင်းအဖြစ်ကိုပိုမိုလေးနက်ကိုထောကျပံ့ဖို့မာတင် Vrijland ထံမှဖုန်းခေါ်ဆိုမှုကြာ? အတိအကျရည်ရွယ်ချက်ကိုခဲ့ကြောင်း Juist..en ။
ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလွတ်လပ်စွာတရားဝင်သို့မဟုတ်နေဆဲတည်ရှိစေခြင်းငှါ, သင်တို့မူကားရိုးရှင်းစွာလူမှုရေးအရနှင့်ငွေရေးကြေးရေးပျက်စီးပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်လည်းဝေဖန်မှုများချေမှုန်းရန်နိုင်ပါတယ်။ ငါလုံးဝမှီခိုဖြစ်ကြောင်းကိုအားလုံးသရေဖျက်မှုနှင့်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တိုက်ခိုက်မှုများအွန်လိုင်းအလှူငွေဖြစ်လာသောကြောင့်, ငါကိုထောကျပံ့ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအမှန်တကယ်အလေးအနက်ခေါ်ဆိုခ (သောသူအပေါင်းတို့သည်ဇိမ်ခံဗတ်အတိုက်အခံ-controlled က်ဘ်ဆိုက်များအားဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါမအနတ္တရောင်းအားကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, သငျသညျအောကျကြောင်းအွန်လိုင်းအလှူငွေ၏အတိုင်းအတာဆနျးစစျနိုငျသညျ ဒီ link ကို.
အရာအားလုံးမေးခွန်းထုတ်! ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့စဉ်းစားပါ။ "လုနီးပါးစစ်မှန်တဲ့" နှင့်ပုံ၏အရောင်အားဖြင့်အရူးလုပ်ခံရမနေပါနဲ့, ဒါကြောင့်သင်အစစ်အမှန်များနှင့်က hidden image ကိုမရိပ်မိကြဘူး။
တဦးတည်းမျက်စိပွင့်လင်း op Coronavirus covid-19 နှင့်သိပ္ပံပညာ - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဘယ်လိုရောက်သွားပြီးဘယ်လိုလွှဲပြောင်းလဲ။
Riffian op Coronavirus covid-19 နှင့်သိပ္ပံပညာ - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဘယ်လိုရောက်သွားပြီးဘယ်လိုလွှဲပြောင်းလဲ။
DeOnschuld op Coronavirus covid-19 နှင့်သိပ္ပံပညာ - သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲဘယ်လိုရောက်သွားပြီးဘယ်လိုလွှဲပြောင်းလဲ။